२४ घण्टा सम्म नेपालमा भरि , सतक रहन माैसम वभागको आह - यस्तो छ कारण - Hamro Abhiyan
२४ घण्टा सम्म नेपालमा भरि , सतक रहन माैसम वभागको आह – यस्तो छ कारण
काठमाडौ। अहले मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको नजक रहेको छ। आगामी २४ घा भ मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको पूवदेख पम तराई भू–भागमा रहने माैसम वभागले जनाएकाे छ । बहीबार देशभरको मौसम परवतन भएको छ । देशका पूव–पमका धेरैजसो भूभागमा भार वष भइरहेको छ । मौसम पूवनुमान महाशाखाका अनुसार दउँसो देशभरको मौसम बदली भइ अधकश ानमा पानी पन सावना रहेको छ। मनसुन सिय भएका कारण देशका अधकश ानमा हादेख मम खालको पानी पन महाशाखाले जनाएको छ।
दउँसो देशका अधकश ानको मौसम पूण बदली भई धेरै ानमा वषको सावना छ। पमका एक –दुई ान, म र पुव ेका एक –दुई ानमा भार वष हुने महाशाखाले जनाएको छ। अहले मनसुनी ुनचािपय रेखा नेपालको नजक रहेको छ। आगामी २४ घास मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको पूवदेख पम तराई भू–भागमा रहने देख। जसले गद यी ानहमा भार वषको सावना रहेको वभागले जनाएको छ।
मौसम सिय भएर देशभर पानी पन भएकाले नदीहमा पानीको बहाब बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। पमी भेगका एक – दुई ान, म र पूवका थोरै ानहमा रहेका नदी तथा खोलाहमा पानीको र बढ्ने भएकाले यी ेका ानीय बासीालाई उ सतकता अपनाउन वभागले आह गरेको छ ।
पाकिस्तानी सेनाको गो’लीले चकनाचुर भयो गमिल कुमारको बिवाह गर्ने योजना , ९६ बर्षिय…
एक पुरुषका दुई श्रीमती, किन गरे दोश्रो बिवाह ? थाहा पाए अचम्म लाग्छ !
अघोरी बाबाको बिहेपछि जङ्गि बाबाले गरे ड’र’लाग्दो भ’बिस्यबाणी “पागल…
गायक दुर्गेश थापा बि’रुद्द पर्यो उ’जुरी , दुर्गेशलाई खो’ज्दै काठमान्डौ प्रहरी !
प्रचण्डका ३ हजार कर्मचारीलाई ‘ओलीले’ हटाएर वि’चल्ली बनाएपछि …
ललितपुरको कुपन्डोलमा तिब्र गतिमा गुडिरहेको कार एक्कासी रेष्टुरेन्ट भित्र पसेपछि…